နောက်နှစ်မှာ ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ NBCUniversal – AsiaApps
လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကနေ စပြီး Netflix,Amazon,Hulu,Disney,Apple တို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုလုပ်ဖို့ NBCUniversal မှကြေညာလိုက်ပါပြီ။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို free အဖြစ် ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် ads တွေတော့ပါမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ ပေးပြီးသုံးမယ်သူတွေအတွက်တော့ ad-free ဗားရှင်းကို သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ NBCUniversal ဟာ Universal movie studio တွေကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ တယ်လီဗေးရှင်းရှိုးတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ App ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို iOS ရော Android ရောအတွက် ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
NBCUniversal ရဲ့ ထိပ်ဆုံးပြိုင်ဘက် ကတော့ Netflix ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိမှာသူက ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ ဆရာတစ်ဆူလေ။ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် နာမည်ကြီးပြီးသား video streaming ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့် NBCUniversal က တော့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လုပ်ရဦးမှာပါ။ သူ့ရဲ့ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ အခု လာမယ့် ၂၀၂၀ မှ မြင်တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Asisapps ကဘော်ဒါတို့တွေရော ဘယ်လို ထင်ကြလဲ??? NBCUniversal က Netflix ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ကြလား???
အဲ့တာကတော့ ဘယ်သိမှာလဲနော့် ထွက်လာမှပဲ သိမှာပေါ့… XD
အက်မင် ပေါက်ကရတွေ လျှောက်မေးနေတယ် အပြောခံရဦးမယ် :D:D အဲ့ဒီကိစ္စကို အက်မင်လည်း မသိသေးပါဘူး။
ထွက်လာမှ သုံးသပ်ရမှာမို့လို့ ၂၀၂၀ မှ ဆက်ပြောကြတော့မယ်နော် … 😀